Mogadishu Journal » Puntland oo dalacsiisay Taliye Xaaskiisa ku riday Cudurka HIV/AIDS
Mjournal :-Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, ahna Ku-simaha Madaxweynaha ayaa Xeer Madaxweyne Lr-19, December 01,2019 ku dalacsiiyey sarkaal ka tirsan ciidanka Booliska Puntland.
Sarkaalkan Bashiir Cismaan Cawad oo ahaa Kabtan ayaa loo dalacsiiyay darajada Gaashaanle,kadib markii dhowaan uu shaaciyay in xaas uu guursaday ay qaadsiisay cudurka HIV/AIDS.
Dalacsiinta sarkaalkan ayaa ku soo beegantay maanta oo dunida looga aqoonsaday maalinta cudurka dilaaga ah ee AIDSka. Gaashaanle Bashiir Cawad ayaa ah Taliyaha Saldhigga Galbeed ee Garoowe.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay qabsaday baraha bulshada wareysi uu bixiyay sarkaalkan isagoo ka sheekeeyay qaabkii uu ugu dhacay cudurka iyo weliba inuu cafiyay haweeney qaadsiisay cudurka kadib markii uu guursaday isagoo aan ka warqabin inay qabto cudurka.
Gaashaanle Bashiir ayaa kula taliyay dhalinyarada is guursanaysa in ay marka hore iska baaraan qofka ay guursanayaan.